Ny fiteny indô-ariana dia ireo fiteny mamorona sampana iray ao amin' ireo fiteny indô-iraniana, izay ao anatin' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Ao Azia Atsimo no tena ahitana olona maro miteny azy ireo: ao amin' ny roa ampahatelo avaratr' i India, ao Pakistàna, ao amin' ny tapany avaratra-atsinanan' i Afganistàna, ao Bangladesa, ao Nepaly, ao Srilanka ary ao Maldiva.
Ny mpiteny indô-ariana dia antsasaky ny fitambaran' ny mponina miteny indô-eorôpeana, izany hoe any amin' ny 1 500 000 000 any ho any. Ny tena maro mpiteny dia ny fiteny hindostany (fiteny hindy sy fiteny ordo: olona miisa 240 000 000 any ho any), ny fiteny bengaly (olona 230 000 000 any ho any), ny fiteny penjaby (olona 90 000 000 any ho any), ny fiteny maraty (olona 70 000 000 any ho any), ny fiteny gojaraty (olona 45 000 000 any ho any), ny fiteny ôrià na ôdià (olona 30 000 000 any ho any), ny fiteny sindy (olona 20 000 000 any ho any), ny fiteny nepaley (olona 14 000 000 any ho any), ny fiteny singaley (olona 16 000 000 any ho any), ny fiteny seraiky (olona 14 000 000 any ho any), ary ny fiteny asamey (olona 13 000 000 any ho any).
Ny fiteny indô-ariana dia zana-bondrona lehibe indrindra amin' ireo fiteny indô-iraniana, izay ahitana koa zana-bondrona roa hafa, dia ny zana-bondron' ireo fiteny iraniana sy ny an' ireo fiteny noristania.
1.6 Ny fiteny odià
Ny fiteny hindy
Ny fiteny hindỳ dia tenim-pirenen' i India. Amin' ny lafiny ofisialy, nampiasaina ho lingua franca any India ny fiteny hindỳ, kanefa 40 %n' ny olona fotsiny no mampiasa io fiteny io any India. Any avaratr' i India no misy ny ankabeazan' ny mpiteny hindỳ.
Ny fiteny ordo
Ny fiteny ordò dia fiteny any Pakistana sy any India, mitovitovy be amin' ny fiteny hindy izy fa soratana amin' ny abidy arabo. Betsaka ny teny indramin' ny fiteny ordò amin' ny fiteny persana sy fiteny arabo, ary nanampy feo vaovao ireo fiteny ireo tao anatin' ny rafi-peony. Nanalavitra ny fiteny hindy ny fiteny ordò tamin' ny fisarahan' i India sy i Pakistana tamin' ny taona 1947. Ny fiteny ordò no fiteny fahatelo ambin' ny folo na iraika ambin' ny folo lehibe indrindra eto an-tany.
Ny fiteny bengaly dia Any Bangladesy sy any India atsinanana. Tenim-pirenena izy any Bangladesy ary anisan' ny teny ôfisialin' i India, indrindra any amin' ny faritanin' i Bengaly Andrefana sy any Tripura. Araka ny fanontan' ny World Almanac 1999, ny teny bengaly no tenin-drenin' ny olona miisa 207 tapitrisa. Fiteny indô-eorôpeana any atsinanana indrindra ny fiteny bengaly sy ny fiteny asamesa. Manana abjady (na abogida) azy manokana ny fiteny bengaly. Betsaka ny voambolana bengaly avy amin' ny fiteny sanskrita sy avy amin' ny fiteny arabo sy fiteny persana.
Ny fiteny penjaby na ponjaby dia tenenin' ny vahoaka Ponjaby any amin' ny Faritra Punjab any Pakistàna (ampiasain' ny olona miisa 80,5 tapitrisa tamin' ny taona 2017) sy any India (ampiasain' ny olona miisa 31,1 tapitrisa tamin' ny taona 2011). Maneran-tany dia misy mpiteny teratany miisa 113 tapitrisa eo ho eo ny fiteny penjaby. Ao Pakistana, ny fiteny ponjaby dia soratana amin' ny abidy shahmukhi, mifototra amin' ny soratra persô-arabo; any India, dia soratana amin' ny abidy gurmukhi izy io, mifototra amin' ny soratra indika brahmika.
Ny fiteny maraty dia teny ampiasain' ny olona miisa 75 tapitrisa any India, indrindra ao amin' ny fanjakan' iMaharashtra sy Goa. Ny fiteny maraty dia iray amin' ireo fiteny ôfisialy any India.
Ny fiteny gojaraty no fiten' ny tompontanin' i Gujarat. Misy olona 46 tapitrisa no miteny gojaraty any India sy maneran-tany. Ny fiteny gojaraty no tenin-drenin' i Mohandas Gandhi, i Ali Jinnah ary i Sardar Vallabhbhai Patel.
Ny fiteny odià[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny ôdià na fiteny ôrià dia ampiasaina ao amin' ny fanjakana indian' i Odisha. Io no fiteny ôfisialy ao Odisha, izay ampiasain' ny 82 % amin' ny mponina ao, ary ampiasaina any Bengal Andrefana sy Jharkhand ary Chhattisgarh. Iray amin' ireo fiteny ôfisialy maro ao India ny fiteny ôdià; io no fiteny ôfisialy faharoa any Jharkhand. Io fiteny io koa dia ampiasain' ny mponina be dia be miisa iray tapitrisa farafahakeliny ao Chhattisgarh. Araka ny fanisam-bahoaka tamin' ny taona 2011 dia ny fiteny ôdià no fitenin-drazan' ny Indiana miisa maherin' ny 37 tapitrisa ka ny 35 tapitrisa eo no ao Odisha.
Ny fiteny sindý dia fiteny ao Sindy, ao Azia Atsimo, izay lasa faritanin' i Pakistàna, ampiasain' ny Pakstaney miisa 17 000 000 any ho any ary Indiana miisa 2 800 000 any ho any koa. Fiteny ôfisialin' i Pakistàna sy India ny fiteny sindý. Azo soratana amin' ny tarehin-tsoratra arabo (avy amin' ny abidy arabo) na amin' ny devanagry ny fiteny sindý.
Ny fiteny singaley dia fiteny ôfisialy any Srilanka satria maherin'ny 70 %n' ny olona mipetraka any no miteny singaley. Ny fiteny singaley dia fitenin' ny vahoaka srilankey any Azia Andrefana, an Aostralia, any Eorôpa (Angletera, Frantsa, Italia) ary any Amerika Avaratra, ny totalin' ny mpiteny singaley dia 19 tapitrisa eo ho eo.
Ny fiteny seraiky na fiteny saraiky dia fiteny ampiasaina any amin' ny tapany atsimo-andrefan' ny faritanin' i Punjab (na Penjab) ao Pakistàna. Ny mpiteny seraiky dia afaka mifankahazo amin' ny mpiteny ponjaby. Ny fiteny saraiky dia fitenin' ny olona miisa 25,9 tapitrisa ao Pakistàna, manomboka any amin' ny faritra atsimon' i Punjab, atsimon' i Khyber Pakhtunkhwa, ary faritra an-tsisintany any avaratr' i Sindh sy atsinanan' i Balochistan. Ny mpiteny saraiky no vondrom-poko ara-piteny fahefatra lehibe indrindra ao Pakistàna.
Ny fiteny asamey dia fiteny any amin' ny faritany mizakatenan' i Assam any avaratra atsinanan' i India, misy miteny io fiteny io koa any Arunachal Pradesh sy any amin' ny firenena hafa any avaratra-atsinanan' i India. Misy olona miteny asamey koa any Botàna. Izy no tena atsinanana indrindra amin' ny fiteny indô-eorôpeana ary misy olona 13 tapitrisa no miteny io fiteny io. Manana fomba fanoratana azy manokana izy, ampiasaina matetika rehefa manoratra io fiteny io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_indô-ariana&oldid=1045157"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 11:12 ity pejy ity.